ကလိုစေးထူး: ကားဆရာနဲ့ လင်္ကာဆရာ...
Posted by ကလိုစေးထူး at 4:01 AM
ကောင်းတယ်၊ သိပ္ပံမောင်ဝအောက် မလျော့ဘူး။ ခေတ်ကိုလည်း ထင်ဟတ်တယ်။
သိပ္ပံမောင်ဝတ္ထုထဲမှာ ချောင်းကူးတော့ နွားအမြီးခတ်တာကြောင့် လှည်းဆရာက “လာကြစမ်း၊ အမြီးတွေ” ဆိုပြီး နွားအမြီးနှစ်ခုကို လက်ထဲမှာ စုကိုင်ပုံ၊ “ဘယ်ဖက်ခြမ်းက ဆူးခြုံပုတ်တွေကို သူကြီးကလည်း မခုတ်ခိုင်းဘူးထင်ပါရဲ့” လို့ ပြောတဲ့အတွက် မောင်လူအေး ညာဖက်ကို ရွှေ့ထိုင်ရတာတွေကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိတယ်။
ဒါထက် အဝေးပြေး အမြန်ကားလေးတွေမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းဘေးမှာ ရပ်ပေးတာ ရှိပုံမရဘူးနော်။ ဟီးနိုးကားကြီးတွေမှာတော့ “ကျန်းမာရေးဗျိုး” ဆိုပြီး လမ်းဘေးထိုးရပ်တာ ထုံးစံလိုပဲ။
Apr 18, 2009, 4:33:00 AM
ကျေးဇူးပြု၍ မြို့ဝင်ဂိတ်ကြေးလေး မစပါ ကားဆရာ....။
Apr 18, 2009, 4:39:00 AM
I am from Mudon. And I can relate to your ကားဆရာ :)
Apr 18, 2009, 4:42:00 AM
Apr 18, 2009, 6:37:00 AM
I flashed back in my childhood after reading.
Apr 18, 2009, 8:01:00 AM
အားတော့မနာဘူး ဒါပေမဲ့ ဘယ်နားဝေဖန်ရမလဲမသိအောင် အကွက်စေ့နေလို့ ငြိမ်ပြန်သွားတယ် :)
Apr 18, 2009, 9:08:00 AM
ကိုပေါ...၊ မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။ သိပ္ပံမောင်ဝ အရေးကိုတော့ ကျနော် ဘယ်လိုမှ မမှီနိုင်သေးပါဘူး။ ကျနော်ရေးတဲ့ အမြန်ယာဉ်လိုင်းကျတော့ ထမင်းဆိုင်မှာ နားတဲ့အခါ အပေါ့အလေး ကိစ္စပြီးကြတာမျိုး၊ ပြီးတော့ တခါတလေ လမ်းမှာ ကားနစ်တဲ့အခါ `ခဏဗျို့´ ဆိုပြီး ချုံထဲပြေးကြတာမျိုးတော့ ရှိပါတယ်။ ပထမတော့ အဲဒါလေး ထည့်ရေးမလား စဉ်းစားသေးတယ်။ မရေးဖြစ်လိုက်တာ။ :)
sin dar lar ဆရာတို့ကလဲ ကားဘီးသံကို ကြားလို့မရဘူး။ ဂိတ်ကြေးက ကောက်တော့တာပဲကိုး။ :D
ကိုလွင်မိုးရေ...၊ မုဒုံသားဆိုတော့ ကျနော်နဲ့ မနီးမဝေးအရပ်ကပေါ့။ :)
မော်လမြိုင်သူ...၊ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ။
Bino...၊ ကျနော်လဲ အဲဒီလိုပဲ သတိတရဖြစ်လာတာနဲ့ ရေးမိတာပါပဲ။ :)
ကလူသစ်...၊ အဲဂလောက် မြှောက်နေမှတော့ ဘီယာတိုက်လွှတ်မှ ထင်တယ်။ ဟဲဟဲ။
Apr 18, 2009, 9:55:00 AM
အသက်ဝင်လှတယ် အစ်ကိုရေ..း)
Apr 18, 2009, 10:56:00 AM
Apr 18, 2009, 3:09:00 PM
နွားအုပ်တွေက များပါသဘိနဲ့* ... လို့ ရေးထားတာမြင်လို့။
နွားအုပ်တွေက များပါဘိသနဲ့* ... လို့ သုံးကြတယ်ထင်တာပဲ။
Apr 18, 2009, 3:47:00 PM
It reminds me of Nay Win Myint's 'Thar Li Kar'.
Apr 18, 2009, 5:25:00 PM
ကိုစေးထူးရေ… ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းပါတယ်… အကွက်ကလဲ စေ့လွန်းလို့အဲဒီကားပေါ်ကိုယ်တိုင်ပါသွားပြီး ကားစပယ်ရာစကားတွေ ကိုယ်တိုင်ကြားနေရသလိုပါပဲ… ပြီးတော့ ကားစပယ်ရာတယောက်ရဲ့ အာရုံဖြန့် ကျက်ထားရတဲ့၊ အန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်တွေးတောထားရတဲ့၊ ကိုယ့်ကားပေါ်မှာ ပါတဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့ လုံခြုံမှုကို အမြဲသတိထားရတဲ့ အရေးကြီးပုံနဲ့ တန်ဖိုးကို သတိပိုထားမိသွားပါတယ်… လေးစားပါတယ် ကိုစေးထူးရေ… ဒီလို ပို့ စ်လေးတွေ အများကြီးဖန်တီးနိုင်ပါစေ… နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ….
Apr 18, 2009, 7:53:00 PM
အဟား အကိုမုဒုံသွား တောလား ဖတ်သွားတယ် ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်ဘက်လဲ ဒီလိုပါပဲ လမ်းတွေက သ်ိပ်ကောင်းဘူးရယ်...
Apr 18, 2009, 9:04:00 PM
ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ ကိုစေးထူးရေ... ရသမျိုးစုံပဲ... မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုင်းပင်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်း တွေ့ရတယ်... ပိုက်ဆံပေးပြီး ကားစီးလာတာ မုန့်ဟင်းခါးစားကြွပါဦးလို့ ပြောတာနဲ့ တပျော်တပါး ကားဆင်းတွန်းတာ မြန်မာတွေပဲရှိမယ် ထင်တာပဲ။
Apr 19, 2009, 1:28:00 AM
ဆွဲဆရာရေ...။ ခရီးဆုံးရောက်တဲ့အထိ...။ Slowdown တွေ။ မီးပွိုင့်တွေ...။ လူကူးမျဉ်းကြားတွေ..။ လှည့်ကင်း တွေ...။ စည်းကမ်းမဲ့ လမ်းဖြတ်ကူး သူတွေရှိတော့ သတိတော့ ထားမောင်းပေါ့...။
Apr 19, 2009, 7:49:00 AM
ZIN MINN said...
Congradulation for your post.
Apr 20, 2009, 1:52:00 AM
Apr 21, 2009, 2:03:00 AM
မူးရင်မမောင်းနဲ့ မောင်းရင်မမူးနဲ့း)
တောင်ငူကိုသွားတုန်းက ကားဆရာတွေက ပျဉ်းမနိုး ပျဉ်းမနိုးလို့အော်နေတော့ ထူးဆန်းပြီးဘာလဲလို့ အစ်မကိုမေးတာ အဲ့တာ ပျဉ်းမနားကိုပြောတာတဲ့ ဆန်းပါ့ အိုဘယ့် ကားဆရာ ။
Apr 21, 2009, 4:54:00 AM
ကိုစေး အရေးလေး သွက်သဗျ ။ ဖတ်ရတာ စပယ်ရာ့ အသံကို တကယ်ကြားနေရသလို ။း)
Apr 22, 2009, 9:49:00 AM
Tag ထားတယ် အစ်ကိုရေ့း)
ဒီကားထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ပါရင်တောင် ကိုကလိုစေးထူးရေးတဲ့စာကို ဖတ်ရတာလောက် ရုပ်လုံးပေါ်အောင် ခံစားတတ်မယ်မထင်ဘူး။ စာရေးသိပ်ကောင်းတယ်။
Apr 25, 2009, 5:26:00 AM
အရေးအသားကောင်းလွန်းလို့ ကိုယ်ကိုတိုင် မုဒုံသွားတဲ့ ကားကိုစီးနေသလိုပါပဲ...
Apr 30, 2009, 12:04:00 AM
Apr 30, 2009, 7:10:00 PM
ကလိုစေထူးက ကားစပယ်ယာတယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို အကွက်ကျကျသိရှိလေ့လာထားတာဘဲ။ အဲဒါကို ခင်ဗျားရဲ့စာရေးအတတ်ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ အင်မတန်မှ လှပတဲ့ စာတပုဒ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဦးမောင်ဝ သာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေရင်တော့ ငါ့ကိုမှီအောင်ရေးနိူင်သူပေါ်လာပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာမှာဘဲဗျ။ မောင်လူးအေး လို ဇာတ်ကောင်နာမည်လေး ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလား၊
May 3, 2009, 9:50:00 PM
ဖတ်ရတာတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုစေးထူးဘလော့ကိုဖတ်ပြီးတိုင်း မျက်စေ့စူးတယ်ဗျာ။
နောက်ခံအရောင်က စူးပါ့။ ကျွန်တော်ပဲမျက်စေ့မှုန်လို့လားတစ်ခုခုပဲဗျို့။ :D
May 13, 2009, 2:19:00 AM
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါ ကွန်ပြူတာခုံပေါ်ဘဲ တက်ထိုင်ရတော့မလို ...
ကွန်ပြူတာခုံကိုဘဲ ဆင်းတွန်းရမလိုနဲ့ ....
ဖတ်သူကို တခရီးသွားထဲ ဖြစ်အောင်
( ကဲ....ခရီးသည်တွေအားလုံး ရှေ့ ဂိတ်မှာ လမ်းဆင်းလျှောက်ရမယ်နော်...အားလုံးဘဲ
Jun 3, 2009, 9:09:00 AM
နားနေတာကြာပြီနော်.. သတိရလို့ လာကြည့်တာပါ..
ဟိုး..... ရှေ့မှာ ပန်းတိုင်ရှိတယ်.. လာသွားကြစို့..
Jun 5, 2009, 10:39:00 PM
အသစ်ဖတ်ရမလားလို့ မျှော်ရတာ မောပြီဗျာ။
Jun 28, 2009, 1:29:00 PM